Fantaro ny sary hosodoko David Bowie avy amin'ireto printy ireto | Famoronana an-tserasera
Sary hosodoko nataon'i David Bowie
Hatramin'ny nandaozany antsika dia nandalo an'ireto andalana ireto aho tao anatin'ny fotoana roa hitondra fanomezana avy amin'ny mpanakanto maro karazana hatramin'ny andro nahafatesan'i David Bowie sy saripika photorealistic roa taona lasa izay izay nahafahanay nianatra ny teknikan'ilay mpanao drafitra izay, ho an'ny afovoan'ny pensilihazo miloko, nitondra anay ny endrik'ity mpanakanto ity indray, mpitendry mozika ary mpilalao sarimihetsika.
Ary tsy hoe mijanona amin'ny zavatra nananany tahaka ny mpihira mahafinaritra sy mpilalao sarimihetsika hitantsika tamin'ny sarimihetsika sasany toa ny Inside the Labyrinth, fa nanao ny hosodoko manokana ihany koa izy nanova azy ho mpanakanto maro karazana. Ity fahaiza-manao amin'ny endrika fanehoankevitra samihafa amin'ny alàlan'ny fitaovana isan-karazany ity koa dia nahatonga azy ho afaka nanova ny tenany sy manavao ny tenany isaky ny kely, iray amin'ireo toetra lehibe nananany.
Maneho hevitra, fihetsem-po ary fahatsapana avy amina fampiharana kanto toy ny mozika, manome fomba fijery sy dikany hafa azo ampiharina tsara amin'ny sary hosodoko, toy ny aseho amin'ny sanganasa isan-karazany izay nahazoany aingam-panahy avy amin'ny mpanao hosodoko toa an'i Francis Bacon sy ny hafa.
Avy amin'ny isan-karazany sarin-saribao saribao na dia sary hoso-doko tsy misy fotony aza izay mampiseho lafiny maizina izay tsy nijanonany naseho tamin'ny fotoana maro tamin'ny fiainany. Ampahany maizimaizina izay manenjika antsika rehetra tahaka an'io aloka io izay apetratsika foana rehefa mazava ny andro.
Bowie koa dia manana lelany maromaro natokana ho an'ny dia nataony tany Afrika atsimo izay nahafantarany tantara iray momba ny fomba niheveran'ny foko voalohany nahita ilay lehilahy fotsy hoditra fa notsidihan'ny razambeny izy ireo, satria amin'ny angano dia miseho amin'ny endrika matoatoa amin'ny fotsy izy ireo.
Afaka mahita ianao sary Bowie hafa rehetra avy amin'ny ity tranonkala ity izay misy maro an'isa be izay mampiseho ny vinavinan'ny anatiny indrindra holazaina amin'ny alàlan'ny haino aman-jery miavaka toy ny hosodoko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary hosodoko nataon'i David Bowie
Logo famantarana biby minimalista miaraka amin'ny endrik'izy ireo tokana
Famolavolana tranonkala: mamaly sa mampifanaraka? Inona no mahasamihafa azy?